काठमाडौं–विप्लव समूहका उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज माइला लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजधानीको काँडाधारीमा सुतिरहेका लामालाई आइतबार मध्यराती प्रहरीको टोलीले घर हालेर नियन्त्रणमा लिएको विप्लव समूहका एक नेताले जानकारी दिए ।
प्रहरीले उनको राजधानीका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटको घटनामा संलग्नता रहेको दाबी गर्दै खोजीकार्य तीब्र पारेको थियो ।
उनी काँडाधारीमा रहेको विशेष सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख (एसएसपी) सहकुल थापाले जानकारी दिए । उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै थापाले थप केही खुलाउन चाहेनन् । यद्यपी लामासँगै रेशम तामाङ नामका अर्का एक विप्लवका कार्यकर्ता समेत पक्राउ परेका छन् ।
सरकारले गत फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सावधान ! भारी हिमपातको सम्भावना भएकाले सतर्कता रह...
उच्च पहाडी र हिमाली भू–भागमा हिमपात, देशका विभिन्...
सामूहिक खेतीसँगै घरबास बनाइँदै
भारतमा भेटियो दुईटाउके कोब्रा, 'भगवान' भन्दै स्थानीयले वन्यजन्तु अधिकारीसमक्ष हस्तान्तरण गर्न मानेनन्
लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित २ जना पक्राउ
लाखौँ पुराना फोनबाट व्हाट्सएप एप्लिकेसन हट्दै, तपाईंको फोन कुन हो ?
देशभर मौसममा गडबडी : कस्तो छ हवाई उडान ?
उच्च पहाडी र हिमाली भू–भागमा हिमपात, देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा
के गर्दैछ प्रदेश योजना आयोग ? सांसदको असन्तुष्टि